February 12, 2020 – မြန်မာသတင်းစုံ
“အလုပ်နဲ့မိသားစု ယှဉ်လာရင်. .မိသားစုအရေးကို ဦးစားပေးပါ”လို့ ဝန်ထမ်းတွေကို မှာကြားလိုက်တဲ့ ”ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးမ”
“အလုပ်နဲ့မိသားစု ယှဉ်လာရင်. .မိသားစုအရေးကို ဦးစားပေးပါ”လို့ ဝန်ထမ်းတွေကို မှာကြားလိုက်တဲ့ ”ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးမ”. . . လုပ်ငန်းရှင်တစ်ဦးအနေနဲ့ ဘာပဲပြောပြော ကိုယ်အခကြေးငွေပေး ငှားရမ်းထားတဲ့ ၀န်ထမ်းက အလုပ်ပြီးမြောက်တာကို လိုချင်ပါတယ်။ တချို့ အရမ်းတွက်ကပ်တဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေကျတော့လည်း သူတို့ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် ၀န်ထမ်းတွေကိုပါ မိသားစုကို နောက်မှာထား၊ အလုပ်ဆိုမှ အလုပ်ဖြစ်စေချင်နေတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထူးထူးခြားခြား ချယ်ရတီဒယ်လ်မိုဆိုသူ ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် သူဌေးမကတော့ စံပြုထိုက်တဲ့ သူဌေးတစ်ဦးလို့ ဆိုရမလိုပါ။ သူမက သူမရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပို့စ်တစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းနဲ့ follower Read more
ရဲရငျ့အောငျက ညီမဖွဈသူအတှကျ ခဈြသူကောငျးပါလို့ပွောလာတဲ့ စောယုနန်ဒာ
စောယုနန်ဒာကတော့ ညီမဖွဈသူ ဧငွိမျးဖွူတို့ စုံတှဲကိုကွညျ့ပွီး အားကမြိတယျလို့ဆိုပါတယျ။ ရဲရငျ့အောငျအပျေါ သူမရဲ့ သဘောထားကိုလညျး ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွလာပါတယျ။ သရုပျဆောငျစောယုနန်ဒာကတော့ ညီမဖွဈသူ ဧငွိမျးဖွူရဲ့ အခဈြရေးနဲ့ ပတျသကျပွီး သူမရဲ့ သဘောထားကို ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပွောပွလာပါတယျ။ ဧငွိမျးဖွူနဲ့ ရဲရငျ့အောငျတို့ စုံတှဲကလညျး တကယျကို ခဈြကွတဲ့ ခဈြသူတှပေါလို့ Duwun Media အငျတာဗြူးမှာ ဖွဆေိုခဲ့ပါတယျ။ “ ကိုယျက အခဈြရေး ကံမကောငျးဖွဈနတေဲ့အခြိနျမှာ သူတို့အတှဲနဲ့ ဘားကိုသှားတော့ သူတို့ကလညျး Ro တယျလေ။ ကိုယျလညျး မကျြနှာတောငျ လှဲထားရတယျ Ro Read more
သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သီခငျြးဆိုရတော့မှာမို့ ဝမျးသာနတေဲ့ ရှထေူး
ရှထေူးကတော့ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ အတူတူ သီခငျြးတှေ ပွနျဆိုရတော့မှာဖွဈလို့ ဝမျးသာပီတိဖွဈလို့နပေါတယျ။ မဆုံတာ ကွာတော့လညျး လှမျးတယျလို့ ဖှငျ့ဟ ပွောပွလာပါတယျ။ ရှထေူးကတော့ ဖဖေျောဝါရီလ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ ပွုလုပျမယျ့ Myanmar Top 100 by joox ဖြျောဖွပှေဲကွီးမှာ ပါဝငျသီဆိုဖို့ရငျခုနျနတေယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒီပှဲမှာ သူငယျခငျြးတှနေဲ့ သီခငျြးတှေ အတူတူပွနျဆိုရတော့မှာမို့ ဝမျးသာနတေယျလို့ Duwun media ကနေ ပွောပွလာပါတယျ။ “ ကြှနျတျောလညျး ကနျတျောကွီး မြှျောစငျကြှနျးမှာ သီခငျြးတှဆေိုရငျးနဲ့ ဘဝတှေ စခဲ့ကွတယျ။ Read more
ဝူဟနျဗိုငျးရပျဈ အတှကျ အဖွမေပျေါသေးခငျ နိုကျဂြီးရီးယားမှာ ရောဂါတဈမြိုးထပျပျေါ.
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အတွက်တစ်ကမ္ဘာလုံးအာရုံနောက်နေချိန်မှာနိုက်ဂျီးရီးယားမှ​​ရောဂါတစ်မျိုးထပ်ပေါ်လာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ အဆိုပါနိုင်ငံမှာထူးဆန်းတဲ့အဖျားရောဂါကြောင့်အခုဆိုရင်​သေဆုံးသူ(၁၅)ဦးအထိရှိသွားခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်လူ(၁၀၀)ကျော်ကူးစက်ခံထားရပြီးဘာရောဂါလည်းအတည်မပြုနိုင်သေးပါဘူး ဒီအကြောင်းကို The Independent The Sun News Online နဲ့ The Guardian Nigeria သတင်းစာတွေမှာအကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားပြီး Benue ပြည်နယ်ကနေစတင်ပျံ့နှံ့ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိအချိန်ထိ ဒီရောဂါဘာဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ သံသယလူနာ(၁၁၅)ယောက်မှာ(၁၅)ယောက်အထိ​သေဆုံးထားပြီဖြစ်လို့ပျမ်းမျှအားဖြင့်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ထက်တော​ကြောက်ဖို့ကောင်းနေတယ်လို့ယူဆရမှာပါပြင်းထန်အဖျားရောဂါဟာဘယ်လောက်အထိ ကြောက်စရာကောင်းသလဲဆိုကူးစက်ခံရသူကို (၄၈)နာရီအတွင်းပင်​သေစေနိုင်ပါတယ်တဲ့နိုက်ဂျီးရီးယားကျန်းမာရေးဝန်ကြီး Osagie Ehanire ကတော့အခုပြင်းထန်အဖျားရောဂါဟာအီဘိုလာလက်ဆာအဖျားရောဂါတွေနဲ့တူညီမှုမရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီ​ရောဂါလက္ခဏာတွေကလည်း ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ကွာခြားမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အခုပြင်းထန်အဖျားရောဂါဟာ​အော့အန်ခြင်းအဆစ်အမြစ်များ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့အပြင်းအထန်ဝမ်းလျှောခြင်းတွေပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်Osagieရဲ့ထုတ်ပြန်မှုမှာအခုအခြေအနေကို Nigerian Centre for Disease Control (NCDC) ကအမြန်ဆုံးတုန့်ပြန်ဖြေရှင်းနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ လင်းဇော်ကို (D Nae Khit)
မိမိ ကံဇာတာမှာ ထီပေါကျ ကိနျး(ငှဝေငျကိနျး)ရှိ မရှိ တှကျကွညျ့ရအောငျ
မြန်မာမွေးသက္ကရာဇ်ကိုတည်၍ မွေးနံဂြိုလ်သက်နှင့်ပေါင်းပါ။ ပေါင်းထားသောရလဒ်ကို (၃)နှင့်စားပါ။ ရလဒ်ကမယူ၊အကြွင်းကိုသာယူရမည်။ ထိုအကြွင်းကို တည် မိမိအသက်နှင့် ပေါင်းပါ။ ထိုပေါင်းထားသောရလဒ်ကို (၇)နှင့်စားပါ။ အကြွင်းရလဒ်သည် (၅) သို့မဟုတ် (ဝ) ကြွင်းမှထီထိုးပါ။ (၅)ကြွင်း လျှင် တစ်ဦးတည်းထိုးပါ။ (ဝ)ကြွင်းလျှင် စပ်တူထိုးပါ။ ပုံတွင်တွက်နည်းနမူနာပြထားပါသည်။ အားလုံး သိန်းထီဆုကြီးတွေပေါက်ပီး မိသားစုနဲ့အတူ ဘဝခရီးကို ပျော်ရွှင်စွာ ဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေ…။ လေးစားစွာဖြင့် … ပေသီး။
အခြိနျတနျရငျ ချေါအိပျလိုကျ ပွီးရငျ ပွနျလှတျလိုကျနဲ့ တခြို့ မိနျးခလေးတှဆေို ဂြုံးဂြုံးကနြပွေီ
ချစ်သူရည်းစားနဲ့ Living Together ကိစ္စ ချစ်သူ ရည်းစားတွေ တွဲလာတာ ကြာလာတဲ့ အပြင် တယောက် အကြောင်း တယောက် သိပြီး ( Living Together ) လင်မယားလို ဖြစ်နေရင်တော့ လက်ထပ်လိုက် ကြတာ အကောင်းဆုံးပါ ။ အချိန်တွေ ဘာတွေ ဆွဲပြီး တွဲနေရင်တော့ ကောင်လေးဘက်က မနစ်နာပေမယ့် ကောင်မလေး ဘက်က အရမ်းကို နစ်နာပါတယ် …။ အချိန်တန်ရင် ခေါ်အိပ်လိုက် ။ ပြီးရင် ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တချို့ Read more
နှားကြောငျးသှားသညျ့ အမြိုးသမီးတဈဦး မီးရှို့အသတျခံရ
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ရေဦးမြို့နယ် အင်ပင်ရေ ကျေးရွာတွင် တောထဲ နွားကျောင်းသွားသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး မီးရှို့ အ သတ်ခံရသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ရေဦးမြို့မရဲစခန်း မှ သိရသည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ ရက်က အင်ပင်ရေကျေးရွာမှ အနောက်မြောက်ဘက်ရှိ ရေပြာပေါက်ကုန်းယာတဲရှိ နေအိမ်တွင် နေထိုင်သည့် ဦးတင်လှ၏ သမီးသည် နွားကျောင်းသွားရာမှ ညနေနွားများပြန်လည် ရောက်ရှိချိန်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာခြင်း မရှိသဖြင့် လိုက်လံရှာဖွေရာမှ မီးရှို့အသတ်ခံထားရကြောင်း သိရှိရခြင်း ဖြစ်သည်။ အသတ်ခံရသူ မနီလာအေး (၂၇) နှစ်သည် နေအိမ်ယာတဲ၏ တောင်ဘက် Read more
အသကျ(၄၀)မှ ဘဝစတာမို့ အခုထိ ကလေးပဲရှိသေးတယျဆိုတဲ့ ညီညီမောငျ (စမျးခြောငျး)
သုသုကတော့ မိတျကပျဖနျတီးရှငျတဈယောကျအနနေဲ့ ပရိသတျတှစေတငျရငျးနှီးခဲ့တဲ့ သူတဈယောကျပဲဖွဈပါတယျ။ပြျောပြျောနတေတျပွီး ဟာသဉာဏျရှငျလှတဲ့ သုသုကတော့ ကိုယျတိုငျဖနျတီးထားတဲ့ Tik Tok ဗီဒီယိုလေးတှကေို ရိုကျကူးပွီး ပရိသတျတှကေို ပြျောရှငျအောငျဖနျတီးပေးရာကနေ ပရိသတျတှကေတော့ သုသုကို ပိုမိုခဈြခငျလာကွတာပဲဖွဈပါတယျ။ နောကျပိုငျးမှာတော့ သုသုဟာ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးတှကေိုပါဝငျရိုကျကူးဖို့ကမျးလှမျးခံခဲ့ရပွီး ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးမှာပါဝငျရိုကျကူးခဲ့ပွီး ပွသခဲ့ခြိနျမှာတော့ ပရိသတျတှကေ သုသုရဲ့ သရုပျဆောငျမှုတှကေို သဘောကနြှဈသကျခဲ့ကွပါသေးတယျ။လကျရှိမှာဆိုရငျလညျး တတိယမွောကျ ရုပျရှငျဇာတျကားကွီးကိုပါရိုကျကူးခဲ့ပွီးပွီပဲဖွဈပါတယျ။လတျတလောမှာလညျး သုသုတဈယောကျက ဟာသအနနေဲ့ပွောလိုကျတဲ့ စကားလေးကို ပရီသတျတှကေတျောတျောလေးသဘောကနြခေဲ့ကွပါသေးတယျ။ အဲ့တာကတော့ “အသကျ (၄၀) မှ ဘဝ စတာဆို (၂)နှဈတောငျလိုသေးတယျဆိုတော့ ကိုယျတှကေ ကလေးပဲ” Read more
တရှာလုံးကုနျလုနီးပါးလောငျကြှမျးနတေဲ့ မကှေးတိုငျးကရှာလေးတဈရှာက မီးလောငျမှုပုံရိပျမြား
အိုးပြင်မဲ‌ကျေးရွာ မီးလောင်မှုအ‌ခြေအနေ မင်းဘူး၊(စကု)မြို့နယ်မနက်ဖန် အမြန်ဆုံးကူညီထောက်ပံ့ရန်အားလုံးသတင်ပို့ထားပြီအိမ်ခြေ ၅၀ ခန့် မီးလောင်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ လက်ရှိမီးလောင်မှုအခြေအနေပုံရိပ်တွေကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ Credit – Kyaw Swan Yi
သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပကျသကျပွီး အပွငျမှာပါဝဖေနျလာသူတှကေို ပညာသားပါပါနဲ့ တုနျ့ပွနျလိုကျတဲ့ အသေငျခြိုဆှရေဲ့ဗီဒီယို
Single Mother အဖွဈနဲ့ သမီးလေးကိုလကျဆှဲပွီး အမြားကွားမှာ ရငျကော့ခေါငျးမော့ပွီး ရပျတညျနတေဲ့အသေငျဟာ အရငျကလိုပဲ ပရိသတျတှရေဲ့ ရငျထဲကိုရောကျတဲ့ သံစဉျတှနေဲ့ အားလုံးရဲ့အခဈြတှကေို ဆကျလကျသိမျးပိုကျထားနဆေဲပါပဲ။ သူမကိုဝဖေနျသူတှေ အမြိုးမြိုးရှိပမေယျ့ သူမရဲ့ခန်ဓာကိုယျနဲ့ပကျသကျပွီးတော့ ဝဖေနျသူတှကေိုတော့ ဒီနမှေ့ာ ဗီဒီယိုလေးနဲ့ တုနျ့ပွနျခဲ့တာပဲဖွဈပါတယျ။ ကလေးမှေးထားတဲ့မိခငျတိုငျးဟာ ခန်ဓာကိုယျအလေးခြိနျတိုးလာတတျတာတော့ သဘာဝပါပဲ။ သူမကိုဝိတျလြော့ဖို့ပွောတဲ့ ပရိသတျ တဈယောကျကို ” လူတှရေဲ့ အစှဲကို အပွောခံပွီးတော့ကို ရအောငျခြှတျမှာ ကြှနျမ ကို ဝိတျခစြခေငျြရငျ ဝိတျခဖြို့မပွောပါနဲ့ ကြှနျမက ဘေးက တှနျးအား ပေးနရေငျဘယျတော့မှ Read more